Pasta miaraka amin'ny hena, voanjo ary holatra masaka ao amin'ny Thermomix | ThermoRecipes
paty40 minitraOlona 4460 kaloria
Raha kely ny fotoananao ary kely ny fanirianao hiditra ao an-dakozia, ity no fomba fanaonao. Andao mahandro iray paty miaraka amin`ny Bacon, holatra sy pitipoà tsy mampiasa afa-tsy Thermomix, tsy misy vilany na endasina.
Hanao ny takelaka maivana kokoa Ilainao fotsiny ny manolo ny bacon amin'ny ham masaka amin'ny cubes. Amin'ny holatra, azonao atao ny mampiasa Portobello, holatra na holatra isan-karazany.
Raha misy holatra sisa tavela dia avelako aminao ny rohy mankany amin'ny iray amin'ireo holatra fanangonana. Hahita fomba fanamboarana matsiro be dia be miaraka amin'ity akora ity ianao. Manomboka ny fararano… amin'ny vanim-potoanan'ny holatra!
1 Pasta miaraka amin'ny bacon, pitipoà ary holatra
Ity paty misy bacon ity dia tsy ampiasaina afa-tsy Thermomix. Hanendasantsika ny paty ao anaty vera mihitsy, miaraka amin'ireo akora sisa.
Tongolo lohataona 1
Pitipoà 120 g
130 g ny holatra Portobello (mety ho holatra)
350 g an'ny paty fohy
Apetratsika ao anaty vera ny chives, tapatapaka ary menaka. Programa izahay 5 segondra, hafainganam-pandeha 7.
Izahay etsy ambany 3 minitra, 120º, hafainganana 1.
Manampy ny bacon sy ny programa izahay 3 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganana 1. Ampidinintsika miaraka amin'ilay spatula izay sisa tavela amin'ny rindrin'ny vera.
Manampy ny peas izahay. Tetehina ny holatra ary ampidirina ao koa. Programa izahay 3 minitra, maripana varoma, fihodinana havia, hafainganana 1.
Arotsakay ny rano sy ny programa 7 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganana 1.
Manampy ny sira sy ny paty izahay. Izahay dia programa ny fotoana mahandro paty voalaza ao amin'ny fonosana, 100º, fihodinana ankavia, hafainganam-pandeha sotro.
Avela hipetraka ao anaty vera mandritra ny roa minitra eo ho eo.
Asio dipoavatra kely, afangaro amin'ny spatula ary manompoa.
Fanazavana fanampiny - Manomboka ny fararano… amin'ny vanim-potoanan'ny holatra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Pasta miaraka amin'ny bacon, pitipoà ary holatra
Vary malefaka miaraka amin'ny bacon sy gorgonzola